Co1 2ld, Studios For Sale and For Rent in Colchester, Essex
I-1-10 yoluhlu lwe-43
Indawo yokuhlala entsha kumgama wokuhamba iYunivesithi kunye neziko ledolophu. 24/7 Ukhuseleko, abagcini babantwana kunye neekhamera zeCCTV. Kubandakanya igumbi eliqhelekileyo kunye nomabonwakude omkhulu onendawo yokubonisa ngokukhululekileyo nendawo yokuhlala abahlali ngoomatshini abathengisa kunye negumbi lokufundela. Iindawo zokuhlamba iimpahla ziyafumaneka. Zonke iintlawulo zifakiwe kwaye akukho zokhuseleko ...